MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 934
>England trip - part 6
> ဒဂုန်တာရာနဲႚ စာရေးဆရာမဵား မိတ်ဆုံစကားဝိုင်းဖြဲႚုကမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ူပီးခဲ့သည့် ရက်သတ္ဇပတ်က သံလ္တွင်ူမြိႚတငြ် စာရေးဆရာမဵား စုပေၝင်ူးပီး စာရေးဆရာုကီး ဒဂုန်တာရိာံငြ့် မိတ်ဆုံစကားဝိုင်းဖြဲႚူဖစ်ုကတယ်လိုႚ သိရပၝတယ်။ စာရေးဆရာမဵား မုကာခဏ...
>ဗုသ – နအဖက ဗမာူပည်သူတေကြို စိမ်ခေၞလိုက်္ဘပီ
> နအဖက ဗမာူပည်သူတေကြို စိမ်ခေၞလိုက်္ဘပီ ဗုသဖေဖော်ဝၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ်တင်အောင်ူမင်ဦးလက်မတ်ြနဲႛ ထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ နအဖရဲႛ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၁/၂၀၀၈တိုႛဟာ စစ်ေုကူငာခဵက်တခုအလာူးပည်တငြ်ူးပည်ပမြာ ဂယက်ထသြားတယ်။ နအဖက သူတိုႛရဲႛလမ်ူးပေူမပုံရဲႛ စတုတဉေူခလမြ်ူးဖစ်တဲ့...
>မောင်ရြေုကြး – ရေနံ – အိုံမြ ခဵစ်ုကည်ရေး
> ရေနံ – အိုံမြ ခဵစ်ုကည်ရေး မောင်ရြေုကြးဖေဖော်ဝၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ရုရြား – ဗမာ သံဆက်တိာံစြ် ၆၀ူပည့်ူပီ ဆိုပီး ပူတင်-သန်းရြေိံတ်ြဆက်သ၀ဏ်လြာတြေ တခမ်းတနားဖြဲႚလာတာတြေ...
> ကာတွန်း ဦးဘဂျမ်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ တွင် ၁၀၆နှစ်ပြည့်ပြီ မိုးမခဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ကာတွန်းဆရာကြီးဦးဘဂျမ်း၏ အသက် ၁၀၆ နှစ်ပြည့်သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့နှင့် ကွယ်လွန်ခြင်း ၅၅...
>ူမန်မာသူငယ်တန်း ဖတ်စာသစ်မင်းတစေဖေဖော်ဝၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ နစ်နေမန်းဘလော့ကူပန်ကူးဖော်ူပပၝတယ်။ုကိက်ြလိုႚပၝ။ (မိုးမခ) No tags for this post. Related posts No related posts.
>သာသနမောဠိ အဖြဲႚခဵပ်ြက တပ်မတော်ေုကူငာခဵက် ၁/၂၀၀၈ိံငြ့် ၂/၂၀၀၈ ကို ကန်ႚကကြ်ေုကာင်း ထုတ်ူပန်
> သာသနမောဠိ အဖြဲႚခဵပ်ြက တပ်မတော်ေုကူငာခဵက် ၁/၂၀၀၈ိံငြ့် ၂/၂၀၀၈ ကို ကန်ႚကကြ်ေုကာင်း ထုတ်ူပန်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာရဟန်းတော်မဵား အဖြဲႚခဵပြ် (ဗဟို)...
>တပ်မတော် အေူခခံဥပဒေ ဆိံ္ဋခံယူပြဲအပေၞ သဘောထားမဵား
> တပ်မတော် အေူခခံဥပဒေ ဆိံ္ဋခံယူပြဲအပေၞ သဘောထားမဵာူးပည်ပက ၀ိုင်းမော်ကိုယ်စားလယြ် ဒူးဝၝးဇော်အောင်က သပိတ်မြောက်စေလိုပည်ပရောက်ိုံင်ငံရေးလပ်ြရြားသူ အောင်သူငိမ်းက ကန်ႛကက်ြမဲဖက် အလေးသာဘီဘီစီ (ူမန်မာပိုင်း) ကောက်ိုံတ်ခဵက် (ဖေဖော်ဝၝရီလ ၁၉ ရက်၊ မနက်ပိုင်း)ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉၊...
> တပ်မတော် အေူခခံဥပဒေ ဆိံ္ဋခံယူပြဲအပေၞအမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵပြ်၏ သဘောထားေုကူငာခဵက်အူပည့်အစုံဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ဒီနေရာကနေ ဖတ်ရြိုံင်ပၝူပီ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>တပ်မတော် အေူခခံဥပဒေဆိံ္ဋခံယူပြဲ တရားဥပဒေိံငြ့်မညီဟု အဲန်အယ်ဒီက ဝေဖန်
> တပ်မတော် အေူခခံဥပဒေဆိံ္ဋခံယူပြဲ တရားဥပဒေိံငြ့်မညီဟု အဲန်အယ်ဒီက ဝေဖန် ဘီဘီစီ (ူမန်မာပိုင်း)ိံငြ့် အဖြဲႛခဵပြ် ဦးသိန်းညနြ်ႛ မေူးမန်းခန်း ကောက်ိုံတ်ခဵက် (၁၈ ဖေဖော်ဝၝရီ၊ ညပိုင်း)ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲႛ...
>ဆရာစမြ်း – အနီနဲႚ အူပာ နောက်ခံကားခဵပ်ပေၞက ထက်ူမတဲ့ ခေၞသံရငြ် -၂
> ဆရာစမြ်း – အနီနဲႚ အူပာ နောက်ခံကားခဵပ်ပေၞက ထက်ူမတဲ့ ခေၞသံရငြ် -၂ ၀င်းတင့်ထနြ်းဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ထောင်အဝင်မြာ ဆရာစမြ်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အဲဒီလို မတ်ြမတ်ြသားသာူးဖစ်ဖယြ် ကိင်္စတေနြဲႛ...
> စာရေးဆရာူမသန်းတင့် ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၁၀ိံစြ်ူပည့်မိသားစုက ကဵင်းပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ူမသန်းတင့် (၁၉၂၉ – ၁၉၉၈) ကယ်ြလနြ်ူခင်း ၁၀ိံစြ်ူပည့် အထိမ်းအမတ်ြပြဲကို...
> ခဵဉ်ပေၝင်ရက်ြသည်ရဲႚိုံင်ငံရေးဖတ်စာရေဒြေၝင်ူးဖဖြေဖော်ဝၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နိဒၝန်း မိုးမခအယ်ဒီတာမင်းမဵားက စာရေးသူကို စာဖတ်သူမဵားကုသဘာပေးသည့် ပေးစာတေကြို ပေးလြာ၏။ မဵက်စောင်းကလည်း ခဲူပလိုက်သေးသည်။ ဇာဂနာူပက်လုံးတခုကိုသာ သတိရမိသည်။ “ရေးခဵင်တာရေး၊ ဒၝတော့...
>ူဗိတိန်ရောက် မနြ်ိံငြ့် ဂဵာမဏီရောက် ခဵင်း တိုင်းရင်းသားတိုႚ အမဵြိးသားနေႚမဵား ကဵင်းပုက မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၆၊ လန်ဒန်တငြ် မန်ြတိုင်းရင်းသားမဵားက ၆၁ိံစြ်ေူမာက်...
>ူမန်မာနေရငြ်းဂဵာနယ်ကို စစ်တပ်က ၀င်စီးမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ လန်ြခဲ့သည့် သောုကာနေႚက စစ်ဖက်နဲႚ ရဲဖက် လက်နက်ကိုင်မဵားကူမန်မာနေရငြ်းဂဵာနယ်တိုက်ကို ၀င်ရောက်ူပီး ရြာဖေပြုံစံမပၝဘဲ စာရက်ြစာတမ်းမဵား ရြာဖေသြိမ်းဆီးတဲ့အူပင် အယ်ဒီတာ...
>ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ – 17th Feb 2008
> မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဖေဖော်ဝၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သားမေမေ – မာမာအေးသတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသာေုက်ာညာက္ပဒုဗိုလ်မြုးကီးဟောင်း အေူးမင့်ိံငြ့် စကားလက်ဆုံပြဲခဵစ်သူမဵားရဲႚ သီးလေးသီး တြေႚဆုံခန်ုးသစေုတးလဵဝန်ုကီးခဵပ်ြရဲႚ သမိုင်းဝင်တောင်းပန်စကားပေၞလေးရဲႚ ဘုန်ုးကီးသီလပေး ဟာသဖဒိုမန်းရြာ ကဵဆုံူးခင်း...
>စောဝေ – အမေ
> စောဝေ – အမေ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမြာ တခၝကူပလြုပ်ခဲ့တဲ့ အိုံပညာသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မြ မတ်ြတမ်းဖေဖော်ဝၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No...
>မိုးဂဋ္ဋန်လြိင် – ၂၀၀၇ူမြိႚ
>ဗိုလ်ခဵပ်ြမြုးကီး သန်းရြေ တတိယနေရာက ဗိုလ်စြဲ
> ကမ္တာအဆိုးဝၝးဆုံး အာဏာရငြ် ၁၀ ဦး စာရင်းတငြ် ဗိုလ်ခဵပ်ြမြုးကီး သန်းရြေ တတိယနေရာက ဗိုလ်စြဲမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ “ပရိတ်” စာနယ်ဇင်းတိုက်ကိံစ်ြစဉ် ထုတ်ူပန်လေ့ရြိသော “ကမ္တာႚလူမိုက်ထိပ်သီး...
>စောဝေကိုယ်ပြားမဵား၊ အမေရိကန်ကဗဵာဆရာတိုႛကလည်း စောဝေခရေဇီ
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစမဵား – စောဝေကိုယ်ပြားမဵား၊ အမေရိကန်ကဗဵာဆရာတိုႛကလည်း စောဝေခရေဇီ အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်းဖေဖော်ဝၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ စောဝေကိုယ်ပြားမဵား “မိစ္စာသန်းရေလြူသတ်သမား ငရဲူပည်သိုႛသြား” ဆိုတဲ့ ၀ၝကဵကို ထည့်ဝကြ်ူပီး ဖြဲႛဆိုထားတဲ့ကဗဵာကို ဖတ်ူပီုးကပၝူပီလား။ ဆရာစောဝေရဲႛလက်ရာ...
>ဒေၝင်းနီ – ခဵစ်သူမဵားရဲ့ ရေဆန်
> ခဵစ်သူမဵားရဲ့ ရေဆန် ဒေၝင်းနီဖေဖော်ဝၝရီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ အဖြိံပ်ခံ အလြာမဵားစြာအတက်ြဘ၀တစ်ခုလုံး ရင်ြးီံးပေးဆပ်ရသမ္တွနဲ့ရောင့်ရဲကေဵနပ်ရဲရင့်စြာ သမာသမတ်နဲ့ရန်ငၝစည်ူးပတ်သူ ၊ ရသင့်တဲ့ လတြ်ေူမာက်ရေးအတက်ြလောကဓံမဵား ခၝးစည်းကဵားကန်ရိုးသားစြာ မာန်ဗီဇနဲ...
>၀င်းတင့်ထနြ်း – ဆရာစမြ်း – အနီနဲႚ အူပာ နောက်ခံကားခဵပ်ပေၞက ထက်ူမတဲ့ ခေၞသံရငြ်
> ဆရာစမြ်း – အနီနဲႚ အူပာ နောက်ခံကားခဵပ်ပေၞက ထက်ူမတဲ့ ခေၞသံရင်ြဝင်းတင့်ထနြ်းဖေဖော်ဝၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈(၁)ိုံင်ငံတိုင်ိးိုံင်ငံတိုင်းရဲႛ အမဵြိးသားစာပေ အိုံပညာယဉ်ကေဵးမြ သမိုင်းလမ်းေုကာင်းတလ္တွောက်မြာ တိုင်ူးပည်နဲႛလူမဵြိးကို ကိုယ်စာူးပြိုံင်တဲ့၊ိုံင်ငံနဲႛူပည်သူလူထုတရပ်လုံးကို ကိုယ်စာူးပြိုံင်တဲ့...
> တိရိစ္စာန်မဵား ထောင်ေူပာင်း အေပီသတင်းဌာနဖေဖော်ဝၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ နေူပည်တော်ူမြိႛတော်သစ်သိုႛ ပထမဦးစြာ ရြေႛေူပာင်းခံရသူမဵားမြာ ၀န်ထမ်းမဵာူးဖစ်ုကသည်။ ယခု အလညြ့်ကဵသူမဵားမြာ တိရိစ္စာန်မဵာူးဖစ်သည်။ စစ်အစိုးရက ၀န်ခဵီစက်ိံငြ့်ထရပ်ကားမဵားအသုံူးပြူပီး ရန်ကုန်တိရိစ္စာန်ဥယဵာဉ်မြ ဆင်၊ မေဵာက်၊ ငက်ြမဵြိးစုံ၊...
>ရေဘြိုသား – ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်
> စံပေတူး ပုံပြောမယ် – ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်ရွှေဘိုသားဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ရွှေဘိုသားက တကိုယ်တည်းလူပျိုကြီး။ အပူမရှာချင်တာလိုလို၊ သူများကို အပူမပေးချင်တာလိုလိုနဲ့ အမှန်က ပြန်ကြိုက်မယ့်သူမရှိတာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သလိုနေနေရတယ်။ မိုးထက်နေတို့လိုလည်း ရတဲ့သူ ဖမ်းဆွဲထားတာမျိုး မလုပ်ချင်ဘူးလို့လည်း...
>ဇော်မိုးအောင် (ကိုရီးယား) – ဒၝဖတ်ူပီးမြ ကိုရီးယားသြားပၝ (အပိုင်း ၂)
> ဒၝဖတ်ူပီးမြ ကိုရီးယားသြားပၝ (အပိုင်း ၂)ဇော်မိုးအောင် (ကိုရီးယား)ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ၁ိံစြ်ူပည့်ရင် သင်တန်းသားဘ၀က ကဋ္ဋတ်လတ်ြပၝူပီ၊ နောက်ိံစ်ြတေဆြို အလုပ်သမာူးဖစ်ပၝူပီတဲ့၊ ၁ိံစြ်ူပည့်ူပီးသြားတဲ့ သူတေကြို...
> အောင်ဆန်းပေးတဲူ့မန်မာူပည်ဉာဏ်ူမင့်စိုးဖေဖော်ဝၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ လူႚလောကထဲ သူနေခဲ့ရတာက ၃၂ိံစြ် ၅ လ ၆ ရက် ထဲရယ်ပၝ။ ၁၃-၂-၁၉၁၅ မြ ၁၉-၇-၁၉၄၇နတ်မောက် ဦးသောဘိသကေဵာင်း၊ ရေနံခေဵာင်းအမဵြိးသားကေဵာင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တေမြ...
>မောင်စမြ်းရည် – ပဒိုမန်းရြာ သြေးသင်္စာ
> ပဒိုမန်းရြာ သြေးသင်္စာမောင်စမြ်းရည်ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ပဒိုမန်းရြာသူ သေရြာူပီ။ သူသေသည်မြာ“လူသေ” သေူခင်ူးဖစ်ပၝ၏။ လူသေူခင်းသည်“မူ” သေူခင်းလည်းမဟုတ်ပၝ။လူသာသေလည်းနာမည်သေမည်မဟုတ်ပၝ။ လူကိုခြေးသတ်ဇာတ်ေုကာင်းထပ်လည်း သတ်သူသာသေ၊ သေသူရင်ြမည်အာဇာနည်မဵြိး၊ သေရိုးမရိခြေတ်၏ဆောင်ပုဒ်၊ အသစ်ထုတ်။ ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆန်း၊ လုပ်ုကံခန်းမမြန်းရြာလာဖန်း၊ လုပ်ုကံခန်းထိသြေးလမ်းဋ္ဌကီးသည်၊...
>သီးလေးသီိးံငြ့် ဆေးရောင်စုံ ယဉ်ကေဵးမကြိုယ်စားလယ်ြအဖြဲႚ
> သီးလေးသီိးံငြ့် ဆေးရောင်စုံ အူငိမ့်အဖြဲႚမသြည်ူပည်သူႚဆိံ္ဋထင်ဟပ်သည့် ယဉ်ကေဵးမကြိုယ်စားလယ်ြအဖြဲႚဆီသိုႚမောင်ရစ်ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ သီးလေးသီိးံငြ့် ဆေးရောင်စုံအဖြဲႚသည် တောင်ကိုရီးယားရောက်ူမန်မာအလုပ်သမားမဵားကို ဖေဵာ်ေူဖူပီးသည့်နောက် ဂဵပန်ိုံင်ငံကူမန်မာမိသားစုမဵားဆီသိုႚ ခဵီတက်တော့မည်ူဖစ်သည်။ ဂဵပန်သံရုံးသိုႚူပည်ဝင်ခငြ့်ဗီဇာ...
> တပ်မတော်၏ အေူခခံဥပဒေဆိံ္ဋခံယူပြဲတငြ်ူမန်မာူပည်သူအားလုံးက တခဲနက် ကန်ႚကက်ြမဲထည့်ုကရန်တိုက်တနြ်ိးိုံးဆော်သည့် စာတမ်းမဵား ထက်ြရြိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၁ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ တပ်မတော်အစိုးရရဲႚ ၂၀၀၈ မေလမြာ ကဵင်းပမယ့်ူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆိံ္ဋခံယူပြဲုကီးမြာူမန်မာတူပည်လုံးက တခဲနက်...
>Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?
> Cartoon Maung Yit – Why we need ZOO in Nay Pyi Daw?Feb 15th, 2007 No tags for this...
>တရုတ်အိုလံပစ် သပိတ်တိုက်ပြဲ အရြိန်ူမငြ့်လာ။ ဆန်ဖရန်မြာလည်း လပ်ြရြားမမြဵား ဆက်
> တရုတ်အိုလံပစ် သပိတ်တိုက်ပြဲ အရြိန်ူမငြ့်လာဆန်ဖရန်မြာလည်း လပ်ြရြားမမြဵား ဆက်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ူဗိတန်က ခဵားလ်စ် မင်းသားက တိဘက်ူပည်လတ်ြလပ်ရေးနဲႚ ဘာသာရေးခေၝင်းဆောင် ဒလိုင်းလားမားကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲႚ တရုတ်ူပည်ရဲႚအိုလံပစ်ပြဲတေကြို မတက်ရောက်ဘူးလိုႚ...
Page 934 of 948«1...932933934935936...948»